Uchavhoterwa Nevawakapa MaUSD500- Masvingo Youdza Mavhenyengwa – ZimEye
Uchavhoterwa Nevawakapa MaUSD500- Masvingo Youdza Mavhenyengwa
Mamiriro aita sarudzo dze province muMasvingo Zanu PF aminama, izvo zvabuda mushure mekunge Robson Mavhenyengwa,Paradza,Charles Munganasa vatuma chikwata chevatsigiri vavo kufamba vachipa vanhu ma USD500.
Vamwewo vebato reZanu PF vaudza zimeye.com kuti havachadi kuvhotera team zvazara Mavhenyengwa nekuda kwemari shoma yavakawana inova yakasiyana neyakapiwa vamwe usiku hwezuva rekisimusi. VaMavhenyengwa kunonzi vari kupiwa mari idzi neG40 kuti vabise “Team Chitova” (Chadzamira,Manyanga namai Chamisa) avo vari kunzi vanodiwa neruzhinji rwevanhu
Sarudzo idzi dzinonzi dziri kuitwa mangwana musi wa 28 Zvita.
Cde Kusasa Izolo vanoti Mavhenyengwa ari kukanganisa pakusiyanisa uwandu hwemari hwemari yaari kupa vanhu, asi vanoti ivo vanovhotera “Team Zvazara” nekuti vakawanawo USD500 yavo.
Mavhenyengwa ari ngaavhoterwe neivavo vaakapa mari, isu tovhotera Chadzamira; anodaro imwe nhengo yeZanu PF muMasvingo
Rusike Finds New Home
Nation In Agony As Flames Burn Warriors
Hwende Exposes Mwonzora Hypocrisy
Ngarivhume Trial -A Case Of Relentless Persecution In Banana Republic
AFCON Update: Nigeria 2 Sudan 0
Mako Laments Oppression Of Young People By Emmerson Mnangagwa
MDC Alliance Launches Voter Registration Blitz
Mnangagwa Politburo Address
Movie Style Escape For Zim Prisoners In SA
Fresh Details Emerge On Why ZBC Radio Presenter Was Dumped By T Freddy
ZRP Announces Commencement Of Blitz Targeting Plateless, Unregistered Vehicles
Two Women Nabbed Over Marijuana Possession
Owen “Mudha” Ncube And The Nexus Of Illegal Gold Panning
Teachers Hauled To Court Over Salaries Protest
“Apologise”: Chiefs Tell ED
LIVE: Finding Missing Grave Of Zim Woman Abused By Witchcraft-Pastor
AK47 Wielding Robbers Pounce On Kezi Couple
“MDC Blundering From Pillar To Post”-Wilbert Mukori
Chaos At Zanu PF’s Masvingo PCC Meeting
Grandpa, Grandson Drowns In Pond
BREAKING: Prophet T Freddy Says Rape Accuser Is Bedding ZBC Boss